Amazing ubuhle nenhle iqembu ovelele pelargonium zonal, ngokuthi rozebudnymi. Ngomusa isiko izimbali, bahlangana nezimbali aluhlaza, ngakho okusikhumbuza isigamu-evulekile encane rose izihlahlana ukuthi lokhu ukufana kwaba ngesisekelo igama obungajwayelekile. Rozebudnye Pelargonium, noma umane rozebudy (Rosaceae) - gustomahrovye nzalo yokubukisa, kuthinta ngokuchichima izimbali, abanobunye inflorescences ezinkulu zikanokusho, obucayi ukufuna ukunakwa. On izici of izitshalo, izinhlobonhlobo nokunakekela kudingekile uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Hlangana pelargonium rozebudnaya
Kukholakala ukuthi pelargonium, zinhlobo njengoba eziningi Geraniaceae umndeni, kubhalansisa sezulu ngokwengqondo umndeni futhi ingenye izitshalo ezindaweni eziningi. Ubuhle bayo enkulu yabakhanga abathelisi zihlaba futhi balimi imfundamakhwela. Grand zizalela abacwaningi wadala eningi izinhlobo kanye nzalo yalesi isiko. Bonke ukwabelana inflorescence olubabazeka kakhulu izimbali double ezinengi ukuze amacembe zabo kaningi zizalwa zingazange kudalulwe ngokuphelele.
Kodwa hhayi kuphela Izimbali nobabazekayo. pelargoniums ngokwezindawo zihlukile elikhanyayo leaf zokuhlobisa enkundleni oluhlaza lapho, zezinkulumo ngokuphinda usike imiphetho elinemifanekiso, siziqhathanise maqembu edging.
Rozebudnye Pelargonium - semishrubs ukuphakama 0.6-0.8 m kusele izingxenyana nje ze anemibala, obukhulu, amahlamvu hairy kanye zokuhlobisa ngokuqinile ohlezi peduncles inflorescences. Ngokwanele mazombezombe okusezingeni eliphezulu ivumela isiko ikhule ekhaya njengoba isitshalo imbiza, yima emphemeni, noma etshalwe umbhede imbali ehlobo. It blooms kuyo yonke inkathi ehlobo, futhi lapho kuqala ekwindla ezaziwumbile, usike bese uhlela egumbini cool nge lokushisa +12 ... +14? C.
Pelargonium rozebudnye: Ukunakekela
Kufanele kuqashelwe ukuthi lolu hlobo a Moody elengeziwe futhi kuyakhandla lokunakekela kunaloyo lotfolwa ngibo bonkhe kumakhophi alo. Ukuhlinzeka Usizo lwezempilo olunikezwa, balimi odinga ukukwazi mayelana izici of ukulima.
Ukukhanyisa kanye neensetjenziswa
Igumbi Rozebudki awukwazi ukubekezelela elangeni, ukulahlekelwa nokuthola zokuhlobisa leaf ukusha, kodwa izinhlobo engadini beqotho ilanga futhi eziqhakaza kahle emibhedeni evulekile. Zonke pelargoniums rozebudnye kakhulu sensitive snaps ezibandayo isikhathi eside, futhi kakade kubhekwe okushisa ungakhululekile ngezansi 10? C. Lokhu akusona isimanga, ngoba lapho kwazalelwa izitshalo neyaziwayo savannah Afrika, futhi kwaba ekuqaleni thermophilic.
Uyacabangela ukuthambisa ngokulinganisela ngamanzi afudumele - esinye isimo esenza abizele rozebudka sezimbali. It hygrophilous, kodwa unomphela waterlogging imbangela elibi ukubonakaliswa izimpande, ngakho ngaphambi nisela isitshalo, inhlabathi kumele kuhlolwe ngaphansi isihlahla ukwenza isidingo ukuthambisa avamile.
izinhlobonhlobo ezimbizeni kudingekile izinqubo yokuhlanzeka, futhi kanye ngesonto lesi sitshalo wafutha noma uhlele kuye eshaweni, ngemva kwalokho amaqabunga uthole indwangu emanzi.
Pelargonium rozebudnye ukuphumula ebusika, ayeke ezikhulayo, ulahlekelwe amahlamvu zabo neziqu kukhona elingenalutho. Ngalesi sikhathi, lesi sitshalo ngezikhathi wanisela, ayeke ukusuthisa bese uyazama hhayi abaphazamisa ke.
Entwasahlobo asebenzayo futhi ehlobo ikhuthaza rozebudku ukukhula ngokushesha, kudinga ukudla okunomsoco. Fed isiko eziyinkimbinkimbi amaminerali Umanyolo njalo emavikini 2-3. Ukugcizelela okukhulu - ku phosphorus-potassium ukwakhiwa ezinikeza izitshalo amandla phakathi luthela futhi zom.
Rozebudki ukukhiqiza kabusha kuphela cuttings. imbewu Pelargonium rozebudnoy akunakulidla ifa elingumbuso izici eliphezulu isiko kwabakhulelwe, ngakho asetshenziswa abalimi zakhe ucwaningo ku isiphelo sesimiso izinhlobo ezintsha.
Cuttings rozebudki nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kodwa kungcono ukwenza kanjalo esikhathini ukukhulisa izitshalo --March kuya ku-July. Nge izitshalo umzali bafa semilignified (hhayi oluhlaza!) Cuttings, ngalinye elikwazi kumele iqukathe 3-5 internodes. Amahlamvu ziyasuswa ngo-9/10, kusale kuphela petiole nge ingxenye encane ishidi, izigaba omile emoyeni imizuzu 30-50.
Cuttings sengozini Amagciwane, abatshali wazibonela ke ukuncoma esihlalweni kwabo ingxube lawela kwenhlabathi atholwe ekhethekile vermiculite in a isilinganiso 1: 1. Izithombo ngaphambi kokutshala iziqukathi disinfected, ezigcwele inhlabathi ekugcobisa cuttings itshalwe. It unaka ngokukhethekile ukuba ukuthambisa, omaphakathi futhi avamile. Umsuka cuttings emva 3-4 amasonto.
Ezimbizeni Pelargonium zikhule ngokushesha futhi adinga ukufakelwa. Carry it in spring, phambi isitshalo ucala kutfutfukisa uye wakwenza ngokuzimisela. izitshalo Isitsha kufanele kube 2-3 cm ebanzi kuka ububanzi langaphambilini, futhi fresh inhlabathi - izakhi futhi esiwuhogelayo. Okuhle emhlabeni ingxube, okuyinto siqanjwe zingxenye ezilandelayo: Turf emhlabathini, humus, Peat, Perlite futhi umfula isihlabathi (4: 2: 2: 1: 1) - noma uthenge inhlabathi pH hlangothi.
Ngemva zitshala izitshalo bazithela futhi ezinsukwini ezimbalwa ukusekela ngokulinganisela umswakama. Ukuvela amahlumela - wuphawu ukusungulwa baphumelele ekhanyayo. Ngaphezu kwalokho isiko cut, ukwakha isihlahla futhi ashukumise zezimbali. Le nqubo Kwenziwa ngokucophelela, uyonquma phansi, uma une amahlumela amasha, amaqabunga noma sifanamsindvo kuthiwa 5-15 cm (uholwe imibono yabo mayelana ifomu ehlathini). Ngemuva ukusika isiko kumele kube eliphezulu ukukhanyisa (hhayi ilanga!) Futhi ukuthambisa ngokucophelela, ngoba ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi leaf ukuhwamuka incane futhi kudinga umswakama kancane. isiko kungaba "kuminyanisa" lapho ngokweqile namanzi.
Pelargonium izinhlobo rozebudnyh
Eyabaningi rozebudok nzima ukukhetha amahle kakhulu. Sibala ezinye kakhulu likufuna izinhlobo, ethandwa futhi uyabukeka okunethezeka athinta inhliziyo:
• Eplblossom rozebud - ezihlukahlukene Rosaceae Pelargonium, obonisa izimbali qwa enomngcele onsomi-pink futhi inhliziyo eluhlaza okotshani, bahlangana inflorescence Friend ezinkulu.
• Denise - i ozithandayo eliphelele nemibukiso eminingi futhi intandokazi balimi. Izinhlobonhlobo nawo njengomnyango mkhulu kakhulu gustomahrovye imibala ayilutho umbala zamapetshisi, ne-abarimi pink emaphethelweni amacembe.
• Albina - isiko compact ezimhlophe enkulu nge Amacembe ayo amhlophe kancane ogqamile izimbali double.
• Pelargonium izinhlobo rozebudnaya Beverly Park - esiyize enhle variegated nge double izimbali salmon-pink.
• Natalie - ezihlukahlukene enkulu nge-semi double izimbali salmon umbala ne ububanzi umngcele emhlophe phezu amacembe.
Akunakwenzeka ukuba adlulisele ubuhle of isiko ezifana pelargonium rozebudnaya. Izithombe ezibonisa rozebudki udlulisele ubuhle izitshalo, Nokho, imbali zemvelo zokuhlobisa endlini noma ingadi, - umbukwane kumnandi ngempela.
Agave - Iyini? Isithombe kanye nencazelo zalesi sihlahla, izakhiwo ewusizo